NgoNovemba, iziganeko ezibalulekileyo ze-3 kwi-geospatial field - ii-Geofumadas
Ngo-Okthobha, 2012 Geospatial - GIS, GvSIG, Microstation-Bentley
Ngeenyanga ubuncinane iziganeko ezintathu eziza kwenzekayo ngokuqinisekileyo kuthatha into evela kwi-ajenda yam ... kunye neeholide lam.
1. SPAR Yurophu
Kuya kuba eHolland, e-Hague malunga nemihla efana ne-Inspired
Esi siganeko igxininisa izinto ze technologies 3D, ingakumbi eYurophu apho lo ngumbandela okwenzeke enkulu. Apha imeko shishino kuxoxwa, funda ngezona ndlela zingcono, neengcinga namacandelo oshishino kwabelwana, kwaye kuthelekiswa kwaye uvumeleke izisombululo hadware abenzi abaziintloko kunye nabakhi-software 3D umfanekiso processing.
I-Laser scanning 3D LiDAR
Ifotogrammetry 3D / 4D
Imephu yeMephu / ephathekayo
Iphofu yePawulo iLiDAR ihamba ngeenqwelo
Ukuhlanganiswa / Ukuhlanganiswa komhlaba
Kwaye nangona kungengundoqo kwizinto ezininzi ezibhekiselele kwiSpeyin, apho iimfuno zokusetyenziswa kobuchwepheshe ziyintloko, siyahlonishwa ukuba simenywe.
Ngexesha lesithathu kuya kuba se-Amsterdam, (iiyure ezimbalwa ukusuka kwiHague) kwifomathi ekhethiweyo engabikho bonke abantu abakwaziyo ukuya kuyo kodwa apho izinto ezenziwa ngabantu abenza ubuchwepheshe beBentley ziboniswa.
Kuya kuba 12 13 ukuya kuNovemba. Nangona kungekho uluhlu labaviwa amabhaso kubonisa, kodwa ngokuqinisekileyo kungekudala ukwaziwa neentsingiselo zonyaka apho phambili sele yenziwe izibonelelo geoengineering akayi kuba engaqhelekanga ukubona enye iperi iiprojekthi Southern Cone inxaxheba kwaye ngaphezu Mexico.
Ngosuku lwesibini lokuphefumlelwa, abaya kuhamba baya kuba nethuba lokuthatha inxaxheba kwitheyibhile yeetafile ezijikelezayo ezisebenzayo kwiinkalo zoshishino kunye nekhnoloji yokuyila, ukwakhiwa kunye nokusetyenziswa kwezinto ezikhoyo. Ezi ngxoxo zibandakanya iinkokheli zeenkampani zobunjineli kunye nezobunjineli kunye nabaqhubi bomnini, kunye neengcali ezivela kulawulo oluphezulu lwe-Bentley kunye nomxholo, ngenjongo yokukhuthaza ukuqonda ngokujulile imiba echaphazelekayo ejongene nezikhundla zengqalasizinda. kunye nezicwangciso zengqesho ye-IT ukudala ixabiso elitsha kunye namathuba amatsha mathwebo.
Iingqungquthela zeerhafu ze-2012 zi:
UkuPhathwa kweeMpahla Ukuthembeka kweZiseko
Ukuhanjiswa kweZibonelelo Zengqondo kwiNkonzo Zoluntu Nezothutho
Iiprojekthi ezidibeneyo (zokwakha)
Imodeli yoLwazi lweNtlawulo: Ukulinganisa / Ukuhlalutya / i-MDO / Ukuboniswa
Ukudibanisa kwi-Data acquisition
3. I-8as International Conference GvSIG
Ezi ziza kuvela kwi-28 ukuya kwi-30 kaNovemba ka-2012, ziya kwenzeka kwi-Complex-Cultural Complex ePetxina (eValencia-Spain).
Umxholo walo nyaka: «Ukuvelisa ikamva: iTekhnoloji, iSolidarity kunye neShishini»
Umxholo ngokwawo ubetha, ukuphefumlelwa kukuqhubeka 7as. Iintsuku, ukususela ngaphaya kokuba kuthathwa njengento "yeTaliban", imodeli yo shishino iyahamba nangemibuzo ecacileyo njengale:
Yintoni enxulumene nokusebenzisana ne teknoloji kunye nezoshishino?
Wonke umntu uyazi ukuba lo mbambano awunanto enxulumene neteknoloji, ngokuqinisekileyo, ngaphandle kokuba sithetha ngento ye-NGO. Kodwa kuthekani nge shishini? Uqoqosho?
Ulwalamano olunxulumene noqoqosho ngaphandle kwe propaganda?
Thina kudala zokuva yintoni na mbi, iviswa zokupheka aba uyazi ngenene yaye ngokuqinisekileyo baya kuhleka kuthi ukuba sizixelele ukuba bakholelwa ukuba ubunye kufuneka ibe lixabiso esisiseko ekhokela zombini lophuhliso lwenzululwazi kunye noqoqosho .
Abo ba landela imodeli ngexesha elithile baya kukwazi ukuba i-gvSIG ihlala ikhuluma ngomzekelo omtsha wokuphuhlisa kunye nemveliso evumela ukuba kuveliswe ngaphezulu, kungcono kwaye ngendlela ehle. Umzekelo apho ukubambisana kuthatha indawo yokulwa. Yaye ukuba ukuze sakhe lo mzekelo omtsha kufuneka sihambelane neengcinga ezintsha, amacebo amasha, ngaphandle koko, ukufuna ukwakha imodeli emitsha ngokusekelwe kwizicwangciso ezidala kuya kusikhokelela ekugqibeleni ukusilela.
Umceli omuhle huh. Kuquka ukutshintsha ukucinga kwakho.
Ixesha lokubhalisa livulekileyo, elinokuthi lenziwe ngefomu ekhoyo kwiwebhusayithi yeNkomfa.
Ubhaliso lukhululekile (umlinganiselo ophantsi).
Ekupheleni kwe-Oktobha inkqubo ye-Symposiums iya kupapashwa, eya kubandakanya iindibano kunye neendibano zocweyo kwi-gvSIG.
Post edlulileyo«Edlulileyo I-GIS Version 3, phantse yonke into esuka kwi-USB
Post Next GIS, obuziintlobo ezininzi, kakhulu izakhiwoOkulandelayo "